Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay xidiga sannadka ee Yurub - BBC News Somali
Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay xidiga sannadka ee Yurub
Image caption Weeraryahanka kooxda Real Madrid Cristiano iyo Lieke Martens
Weeraryahanka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay ciyaaryahanka sannadka ee Yurub, isagoo abaalmarinta kaga guuleystay ciyaaryahanka kooxda Barcelona, Lionel Messi iyo goolhayaha Juventus, Gianluigi Buffon.
32 jirkan oo u dhashay dalka Burtuqiiska ayaa kooxda Real Madrid u sahlay in laba mar oo isku xigta ay ku guuleysato horyaalka Yurub. Waxaana sidoo kale Ronaldo uu ahaa shakhsiga ugu gool dhalinta badnaa horyaalka Yurub, isagoo xili ciyaareedkan dhaliyay 12 gool.
Waxaa ay noqoneysaa markii saddexaad oo uu Ronaldo ku guuleysto abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka ee Yurub.
Sidoo kale gabadha lagu magacaabo Lieke Martens oo u dhalatay dalka Netherlands, una dheesha kooxda dumarka ee Barcelona ayaa iyaduna ku guuleysatay abaalmarinta, iyadoo kaga guuleysatay gabadha dhanka weerarka u uga dheesha kooxda Wolfsburg, Pernille Harde iyo Dzsenifer Marozsan oo iyana ka tirsan kooxda Lyon.